घोपर्नामा भएको जीप दुर्घटनाको हृदयविदारक दृश्यले कस्लाई पीडानुभूति नहोला ? – ebaglung.com
घोपर्नामा भएको जीप दुर्घटनाको हृदयविदारक दृश्यले कस्लाई पीडानुभूति नहोला ?
२०७६ मंसिर १७, मंगलवार १९:३३	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
सुमन सुनार, बुर्तिबाङ २०७६ मंसीर १७ । आज मंगलबार विहान १०.३० बजेको समयमा बडीगाड गाउपालिकाको वडा नं ७ भीङगिठेकोे घोपर्ना कोप्चेमा भएको जीप दुर्घटना अतिनै दर्दनाक थियो । जस्ले यो दुखद दृश्य देखे उनीहरु स्तव्ध बने, जस्ले सुने उनिहरको मन छियाछिया भयो । दुर्घटनाको हृदयविदारक दृश्यले कस्लाई पीडानुभूति नहोला ? बडीगाड खोला किनारमा छरपट्ट छरिएको शवहरुको बिभत्स दृश्यले अकल्पनीय पीडा र दर्द उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तो दुखद दुर्घटना कहिँ कतै नहोस, कहिँ कसैले देख्न नपरोस भन्दै मलिन अनुहारमा एकापसमा कुरा गर्दै थिए दुर्घटनास्थल पुगेका स्थानीयहरु । यस कल्पनै गर्न नसकिने जीप दुर्घटनामा १४ जनाको ज्यान गयो भने अझै गुल्मी ईस्माका धनबहादुर कार्की बेपत्ता छन् । ज्यान गुमाउनेहरुमा अधिकांश गुल्मी ईस्माका थिए ।
निसीखोला गाउपालिका २ बायँखोलामा कार्की थरको देवाली थियो । यसै शुभकार्यमा सरीकहुन गुल्मी ईस्माबाट जाँदै थिए उनिहरु । कुलपूजा स्थलमा पुग्नु अगावै उनिहरुलाई दैवले हरेर लग्यो । कति बिचल्ली होला अकालमा ज्यान गुमाएकाहरुका परिवारको, कल्पनातीत छ ।
गम्भीर रुपमा घाईते हुनेहरु गुल्मी ईस्मा गाउपालिका ४ का मृतक सुचना कार्कीको छोरा ४ वर्षीया हिमाल कार्की, सोही वडाका २४ वर्षीया निमा केसीलाई को थप उपचारका लागी नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौ शिक्षण अस्पताल रिफर गरिएको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रका डाक्टर मिलन मल्ल ठकुरीले जानकारी दिएका छन् । हेलिकप्टर साथ सांसद एवं पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्ट बुर्तिवाङ आएका थिए ।
चालकको गल्ती थियो, वा जीपमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु कोचाकोच गरेका कारण असन्तुलित भै जीप दुर्घटना भएको हो ? छानविनको विषय बन्नु पर्छ । १४ जनाको ईहलिला समाप्त भयो अब भविष्यमा यस्तो कहाली लाग्दो दुर्घटना नहोस भन्नका लागी सबै पक्ष सजग हुनु जरुरी हुन आएको छ ।
निसीखोला – २ बायखोला खोरमा सुख्खा पहिरो खस्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध !